Thola Okuqukethwe Kwakho Kushicilelwe Ngokushesha ngalezi Zeluleko Zokulawulwa Kwesithombe | Martech Zone
Okubonakalayo kuyisici esiyinhloko sanoma yikuphi okuqukethwe kokumaketha. Izithombe, imidwebo, ama-logo - konke kumela umkhiqizo wakho kusuka endaweni yokuqala yokuthinta eya kuwebhusayithi yakho kuya kwelezindaba zamakhasimende akho. Lapho usebenza ekwakheni ama-imeyili asebenza kakhulu, okuthunyelwe kwama-blog okufundisayo, nokuthunyelwe komphakathi okuthakazelisayo, akufanele ukhathazeke ngokuthi uzosithola kuphi isithombe sekhwalithi ongasisebenzisa.
Ungavumeli ukubonwa kwakho kube yibhodlela lokuthola okuqukethwe kwekhwalithi emnyango. Sebenzisa lawa macebiso ukwenza lula futhi wenze ngokuzenzakalela ukuphatha nokwabelana ngokuqukethwe kwakho okubukwayo.
Usebenzisa ifomethi yefayela elifanele - Shintsha ukuguqulwa kwamafayela. Sebenzisa ifomethi yefayela elifanele nosayizi womsebenzi kubalulekile. Kungenye yezinto okuthi uma kwenziwa kahle, kungabonakali kodwa uma kwenziwa okungalungile kunamathele futhi kwenze ukuthi umkhiqizo wakho ubukeke umubi. Wake wazama ukwenza isithonjana seJPEG esincane ngoba yilokho owawunakho? Yebo, akukuhle. Ukulanda ifayela, ukuvula uhlelo lokusebenza lwezithombe, ukushintsha usayizi, ukuligcina njengefayela elisha, nokulayisha ukuze kusetshenziswe kuthatha isikhathi futhi kudala amafayela aphindaphindiwe. Ukunikeza ukuguqulwa kokulanda noma izixhumanisi ezingashumeka zewebhu yisilondolozi sesikhathi esikhulu.
Ukwabelana ngesithombe - Ukuzenzela ukufinyelela kwakho. Ama-imeyili abuyela emuva naphambi kwezicelo ezahlukahlukene zesithombe nefomethi kudla isikhathi kubo bobabili abathintekayo. Vumela ithimba lakho lifinyelele kukho konke abakudingayo endaweni eyodwa. Akusekho ukulinda isithombe esifanele ukuthola okuqukethwe emnyango.
Ukuthola izithombe - Faka iMethadatha ukuze useshe ngokushesha. Ukuthola isithombe esifanele kungaba umzabalazo. Kuphi? Ubani onayo? Ibizwa ngani? Ngisho nesakhiwo sefolda esigcinwe kahle kunazo zonke sinezingqinamba zako. Uma unezithombe eziningi, amafolda amaningi okufanele uqhubekele kuwo. Imethadatha yenza ukusesha nokuthola amafayela ngokushesha. Uma usanda kuqala ngemethadatha, ukusebenzisa amagama angukhiye nencazelo yindawo enhle yokuqala. Cabanga ngalokho abasebenzisi bakho abakufunayo nokuthi yini ekhomba izithombe. Uma usebenzisa i-stock photography noma abathwebuli bezithombe abangochwepheshe, kungenzeka ukuthi amafayela akho asenayo imethadatha. Manje konke okudingayo ithuluzi elikuvumela ukuthi useshe futhi uhlunge ngemethadatha.
Ungaqala kanjani ukusebenzisa lokhu namuhla
Amathuba ukuthi, awuqashelwanga ukugcina konke okuqukethwe kwakho kokumaketha kuhlelekile kepha kuyinto okudingeka yenziwe. Sebenzisa ithuluzi elikwenzela wena, ngaphandle kokuthatha isikhathi sakho noma se-IT ukusetha nokugcina. Ithuluzi elilodwa elenza ukuphathwa kwezithombe nokwabelana kusheshe futhi kube lula I-Smartimage.
Sakhe iSmartimage ngoba amabhizinisi amancane namaqembu adinga indlela elula yokubeka ndawonye, ​​ukuhlela, nokwabelana ngokuqukethwe okubukwayo. Amathuluzi omuntu awanikezi ukulawula nokuguquguquka abakudingayo; ngenkathi zingadingi noma zingakwazi ukukhokhela konke ukusebenza kwesixazululo sangempela se-Digital Asset Management. Sithole ukuthi amabhizinisi amancane namaqembu afuna okuthile okulula, okwazi ukusebenza kahle, futhi okungabizi. UNate Holmes, i-Smartimage
I-Smartimage uhlelo lokusebenza olulula, olusekelwe emafini olwakhelwe amabhizinisi amancane namaqembu adinga ukufinyelela, ukuphatha, nokwabelana ngezithombe nokunye okuqukethwe okubukwayo.
Zibheke ngokwakho, futhi phequlula ingosi yokusebenzisana ye-Smartimage.
Izihlungi zekhasi leqoqo le-Smartimage
I-Smartimage Custom Portal
Imininingwane Yefayela Le-Smartimage
Tags: Idamuukuphathwa kwempahla edijithaliukuguqulwa kwesithombeukuphathwa kwezithombeipulatifomu yokuphathwa kwezithombeIsixazululo sokuphathwa kwezithombeidatha ye-meta yesithombeindawo yokugcina izithombenate holmesyezimgwandula